Ukubhinqa imodeli yabasetyhini 2016. Izinto eziphathekayo eziphathekayo, ubusika 2016
I-Stylish knitted: izinto eziphathekayo ezibhinqileyo ebusika
Ubusika ngaphandle kwezinto ezixutywe kwi-wardrobe kufana neKarl Lagerfeld ngaphandle kwamaziko akhe adumile. Ngexesha elizayo lokubanda, iimpawu zefashini zikhawuleza ukuba zikholise ngokukhawuleza kunye nokudalwa kwamanzi. Iimveli ezenziwe nge- Woolen ezivela kuMasmomo Dutti , OYSHO , Bershka kunye ne- Xamillion kwi-"fashion" ehlaziywa ngayo.
Kwindlela yokuziphatha kunye nenduduzo
I sweater "oversize" ayikho imfashini kwaye ikhululekile, kodwa nayo ... inhle! Oku kuqiniseke ngokuqinisekileyo ukuba abaqulunqi bempawu zaseItaliya uMasmomo Dutti , banikezela abathengi babo ukulungiswa ngokuthe ngqo kwimozulu ebandayo ekhulayo kunye neengqungquthela ezifudumele ezinobumba obunobumba obuhle. Ezi nkcukacha ze-wardrobe zinokudibaniswa ngokukhuselekileyo kungekhona kuphela kwizinto eziqhelekileyo kwisitayela, kodwa kunye neepensile eziqinileyo zeepketi, iipaliti ezincinci kunye nama-culottes athile. Ukuthanda ukugqoka? - Emva koko akufanele uzikhanyele ubunqweno bokugqoka le nkcazelo yesetyhini yearrhebhe nakwiqhwala ezinzima. Ingubo egqwesileyo kunye enobuhle bombala we chocolatelethi eshisayo iya kuthatha indawo efanelekileyo kwindawo yokubhakabhaka yasebusika yabesifazane befashoni. Ingubo emfutshane yemikhono - ilula ngokugqithisekayo nge-poncho enekhenkco kunye nomphetho, ngokungakhathali ukuphonswa phezu kwengubo.
Ngaba sele ufuna ukuziva uhambo olukhethileyo lweNtsha yoMsindo kunye neekhandlela zeKrisimesi? - Ubomi bebusika kunye nobusika busika bunjengokoqobo kwizinto zonke ukusuka kwiqoqo elitsha lezinto eziboshwe eBershka . Lapha ungayifumana i-sweaters kunye nomhlaba wonyaka woNyaka omtsha, kunye nephethini ukwenjenjalo ukukhumbuza iiflekhi zeqhwa entendeni yesandla sakho, kunye nezambatho eziphathekayo kunye nemisebenzi evulekileyo, imikhono eminwe epholileyo, njengentengo kwi-trend6 ehamba phambili, isitayela se-Retro . Kwaye umfanekiso ococekileyo webusika uya kuzaliswa kwaye uhlaziywe ngumbumba onamaqabunga ombala we-powdery-pink.
Ikhaya, ikhaya elihle
Kwaye ukuhlala ekhaya ngendlela elula! Esi sibizo se- OYSHO - uphawu oluvelisa izinto ezintle kwaye ezintle zendlu. I-cardigans edibeneyo, ehlotshiswe ngomphetho oshukumisayo kulo nyaka, iya kufudumala kwixesha elide lasebusika. Isiqwenga esineempahla ezi zixhobo - ezinkulu, iipokotshi ezinamandla eziza kufudumala izandla zakho ezibandayo kungekho mbi kunokuba zifudumele. Abaxhamli befestile yolutsha - i-hoodie yefestile ye-free cut with a hood eyenziwe ithambileyo, inomdla kumzimba, izinto eziphathekayo. Ewe, yeyiphi indlela yomzi onokuyenza ngaphandle kwee-slippers ozifunayo? - Sithanda umzekelo onobuhle obunjani obomvu obomvu, ohlotshiswe ngamapompo amhlophe.
Iimpawu zentloko eziqhelekileyo ezisuka kumashini omdaka obunemibala eqaqambileyo, eneenwele ezipom -pom - ubusika obuthathaka obuvela kwi- Xamillion . Olu fi kelelo olufudumele lunokudibaniswa ngokukhuselekileyo kunye neengubo eziqhelekileyo kunye nezambatho eziphezulu kwisitayela semidlalo. Kwaye oomama beqiniso - izigqoko, ezihlotshiswe ngubunzima obuqhakazileyo, obubonisa ngenyameko umntu, isitayela esikhethekileyo somnikazi wayo. Ngokuqala kwamaqabunga okuqala, kungcono ukufihla iinwele phantsi kweengubo ezimbini zeeboya ezinemibala emininzi ebophayo kunye neepompomom. Iifowuni ze-Woolen kwiitoni zizalisekisa ngokufanelekileyo le ngxube yebusika kwaye ayiyi kubanda ebusika.
Kwibhola eCinderella: i-sequin, i-rhinestones kunye ne-crystal - foot-trend-2016
Ijubethi eneemikhono ezimfutshane
Imfashini, imodeli kunye nezitayela zeebhatyi 2013
Iikhati ezityebileyo kunye namaqabunga: i-spring-ehlobo ka-2014
Inyama e-pita isinkwa sase-Armenia
Ukutya kwiprotheni kubafazi abakhulelweyo
Indlela yokufundela umntwana omncinci kwibhotile?
I-Kruroplasty: izibonakaliso, ubunzulu bokusebenza, ukuchasene
Eyona nto ibangele ukulala ngesondo
Iintlobo kunye nobuchule bokuphunga impumlo
I-cocktail ye-alcoho ye-raspberry kunye namakhambi
I-Horoscope ngo-Oktobha 2017-ibhinqa-i-Libra - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
I-Snack kwi-cognac evela kuNicholas II
Indlela yokunciphisa imiqondiso emibi. Ngaba usuphule isibuko okanye ityuwa echithiwe? Ingxaki ayiyi kuba
Indlela yokuziphatha ngayo nomntu odandathekile
UAna Kalashnikova utshitshiswe utshintsho olubukeka kwimeko